ဝီကီပီးဒီးယား ၁၅/ပါဝင်ဆင်နွှဲ - Meta
သင်၏ ဝီကီမီဒီယာ အတွေ့အကြုံများကို မျှဝေပြီး ပါဝင်ဆင်နွှဲလိုက်ပါ!
ဝီကီပီးဒီးယား ၁၅ မှာ ပါဝင်လိုက်ပါ
ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာ ပါဝင်/ဦးဆောင်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ၈၀ ကျော်ရှိနေပြီး ဆက်လက်တိုးလာဦးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒေသတွင်းက စာနယ်ဇင်းတွေကို ပြောပြပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်အတွင်း၊ ဝီကီပီးဒီးယားဟာ အတိုင်းထက်အလွန် ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သမိုင်းမှတ်တိုင်တွေရဲ့ လက်ကမ်း အနှစ်ချုပ် ကို လုပ်ထားပြီး သင်ကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက်ပေါင်းထည့်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ရင်းမြစ်တွေအနေနဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်မှု ပုံစံနဲ့ မီဒီယာတွေနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေ လည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဝီကီပီးဒီးယား ၁၅ လိုဂိုကို ရေးဆွဲပါ။ ဝီကီပီးဒီးယား ၁၅ အတွက် အိုင်ကွန်တစ်ခုထားရှိနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဒါဇင်များစွာ ပြုလုပ်ထားပြီးပါပြီ။ သင့်ကိုယ်တိုင် ရေးဆွဲထားတာကို ပေါင်းထည့်ပြီး သင့်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကို ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်။
ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းဖြင့် ကူညီပါ။ ဝီကီပီးဒီးယား ၁၅ အကြောင်းကို ဘာသာစကားမျိုးစုံသို့ ဘာသာပြန်ဆိုပေးခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဘာသာပြန်ကြိုးစားမှုကို ကူညီပေးပါ!
လူမှုမီဒီယာတွေမှာ စာလွှာတွေ ဝေမျှလိုက်ပါ။ သင့်အတွက် ဝီကီပီးဒီးယားကို ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရှိစေတယ်ဆိုတာကို သင့်စာလွှာမှာ #wikipedia15 ကို ထည့်သွင်းရေးသားပြီး ကမ္ဘာကြီးကို ပြောပြလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ သင့်စာလွှာကို ပြန်ဖြန့်ဝေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်!
သင်၏ ဝီကီပီးဒီးယား ၁၅ အတွေ့အကြုံများကို ဝေမျှပါ
ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယို မျှဝေ
သင် ဝီကီပီးဒီးယား ၁၅ ဆင်နွှဲနေမှု ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူးထားပါသလား? Wikimedia Commons မှာ တင်ထားလိုက်ပါ!
သင့်ဆင်နွှဲနေမှုများမှ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဇာတ်လမ်းများ ရှိပါသလား? ဝီကီမီဒီယာ ဘလော့ခ်အတွက် စာစုတစ်ခု ရေးသားလိုက်ပါ!
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikipedia_15/Get_Involved/my&oldid=15171449"
Last edited on 21 December 2015, at 19:43